Umfundi uyomela elakuleli eBrazil | Isolezwe
Umfundi uyomela elakuleli eBrazil
Izindaba / 9 September 2018, 11:49am / LUNGI LANGA
ULungelo Maphumulo owenza uGrade 11 ungomunye wabafundi abayisithupha abaqokelwe ukuthi baye komela iNingizimu Afrika emncintiswaneni weMaths neScience, iMostratec Olympiad. Isithombe: SITHUNYELWE
UYOMELA iNingizimu Afrika emncintiswaneni weScience neMaths oseBrazil umfundi (16) wesikole samabanga aphakeme iStar College, eWestville.
ULungelo Maphumulo owenza uGrade 11 ungomunye wabafundi abayisithupha abaqokelwe ukuthi baye komela iNingizimu Afrika emncintiswaneni weMaths neScience, iMostratec Olympiad, ozoba seBrazil kusuka ngo-Okthoba 20 kuya ku-30.
Unina kaLungelo, uNkk Ntombifuthi Maphumulo, uthe indodana yakhe iqokelwe ukuthi ihambele lo mncintiswano emuva kokuthi ihambise umsebenzi wayo wahamba phambili nokwenze ukuthi iqokelwe ukuthi ibe yingxenye yalo mncintiswano.
Uthe uLungelo uthanda ukufunda njengoba eseke wavelela nakwezinye izifundo.
Ngo-2016 uthole isitifiketi sokwenza kahle emncintiswaneni weScience, iNatural Sciences Olympiad. Uphinde waqokelwa ukuthi abe ngomunye wabafundi abahambele ingqungquthela yezilimi yamazwe ahlukene, i-International Festival of Languages, ebiseMozambique ngoMashi.
Ngaphandle kwalokhu uthole indondo yethusi emuva kokuba ngomunye wabafundi abavelele kwezeScience emncintiswaneni wakwa-Eskom wesifundazwe.
UNkk Maphumulo uthe bakuthakasele ukuthola ukuthi indodana yakhe ibe ngomunye wabafundi abaqokelwe ukuya eBrazil .
“Naye ubejabule kakhulu ngesikhathi ethola ukuthi ungomunye wabafundi abaqokiwe njengoba kuyinto abeyifisa kakhulu,” kusho uNkk Maphumulo.
Uthe njengoba behamba kulindeleke ukuthi kube nemali abayikhiphayo elinganiselwa kuR30 000 ezosiza ezindlekweni zokuthenga amathikithi ebhanoyi, ukukhokhela indawo yokuhlala nokunye.
UNkk Maphumulo uthe sebeyikhokhile ingxenye yale mali kodwa isashoda. Uthe bafisa engathi bangathola usizo ukuze uLungelo athole imali yokuhamba.